Onye nnọchi anya obodo New Dominican Republic na Jamaica gara leta Minista na-ahụ Maka Njem Nleta na Jamaica
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Onye nnọchi anya obodo New Dominican Republic na Jamaica gara leta Minista na-ahụ Maka Njem Nleta na Jamaica
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Caribbean • Akụkọ kacha ọhụrụ na Dominican Republic • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • investments • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Iwughachi • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ dị iche iche
Nwere ike 18, 2021
Onye Minista na-ahụ maka njem nleta na Jamaica zutere onye nnọchi anya Dominican Republic na Jamaica
Onye Jamaica Minister of Tourism Hon. Edmund Bartlett na-atụgharị uche na onyonyo a ka ọ na - esonye onye nnọchi anya onye Dominican Republic a họpụtara ọhụrụ na Jamaica, Herụọl Angie Martinez Tejera (nke a hụrụ n'aka ekpe na foto), na mkparịta ụka banyere mpaghara nke imekọ ihe ọnụ n'etiti mba abụọ ahụ.
Onye nnochite anya na Minista ahụ tụlere ụzọ iji kwalite mmekọrịta dị n'etiti mba abụọ ahụ.
Ndị a tụlere bụ ụgbọ elu, njem ọtụtụ ebe, njem njegharị na njikwa nsogbu.
Ndị ọrụ njem njem abụọ kwukwara maka atụmatụ iji wughachi ụlọ ọrụ njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ na mbuso ọrịa ọrịa COVID-19.
Onye nnọchi anya gọọmentị gara nleta nlekọta na Minista Bartlett n'oge na-adịbeghị anya na Njem nleta Jamaica Officeslọ ọrụ New Kingston na-arụ ọrụ. N'ime okwu ndị a tụlere bụ ụzọ mba abụọ ga-esi mee ka mmekọrịta ha sikwuo ike dị ka ikuku ikuku, njem njem ọtụtụ ebe, nkwụghachi njem nlegharị anya, na njikwa nsogbu, yana atụmatụ iji wughachi ụlọ ọrụ njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ na nsonaazụ nke COVID-19 ọgbaghara.
Ministrylọ ọrụ Jamaica nke ndị njem na ndị ọrụ ya nọ na ebumnuche iji bulie ma gbanwee ngwaahịa njem ndị Jamaica, ebe ha na-ahụ na uru ndị na-esite na ngalaba ndị njem na-abawanye maka ndị Jamaica niile. Iji mezuo nke a, o mejuputa atumatu na atumatu nke gha nyekwuo aka maka njem dika igwe nke uto maka onodu aku na uba Jamaica. Ministri ahụ na-agbasi mbọ ike iji hụ na mpaghara ndị njem na-enye onyinye zuru oke maka mmepe akụ na ụba Jamaica nyere nnukwu ikike inweta ego.
jamaica Jamaica njem